ဆိုက်ဘာ နည်းပညာ ရှင်တွေ နဲ့ နောက်ကွယ်က အချက်အလက်များ - Lu Gyi Min - Cell Phone Villa
ဆိုက်ဘာ နည်းပညာ ရှင်တွေ နဲ့ နောက်ကွယ်က အချက်အလက်များ
ပင်တဂွန်စစ်ဋ္ဌာန ချုပ်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေ ကို ၂၄နာရီတိတိ ပိတ်ပစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့ နံပါတ် ၁ ဟက်ကာ ကတော့ Gary McKinnon ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ယနေ့ အချိန်မှာတော့ ထောင်ထဲ မှာ ကျခံနေရတုန်းပါပဲ။အဓိကတော့ သူ ဟာ နာဆာ နဲ့ အမေရိကန် စစ်တပ်ကို လွယ်လွယ်ကူကူ ဟက်နိုင်နေလို့ ပါ။
ဆိုက်ဘာ ဆိုးသွမ်းမှု ကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ကျခံနေရသူ Kevin Mitnick
ဟာ ယနေ့ အချိန်မှာတော့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။သူဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တုန်းက တရားရုံးရဲ့ကွန်ပျူတာတွေ ကို ဖောက်ထွင်းခဲ့ပြီး နျူ ကလိးယား ပစ်လွှတ်မည့် အစီအစဉ်တွေ ကို ၀င်ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
3. Jacob Appelbaum
၀ီကီနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အခြားသော ဟက်ကာ တစ်ယောက်ကတော့ Jacob Appelbaum ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ဘိန်းဖြူ စွဲ နေတဲ့ သူ့ဖခင်နဲ့ အတူ နေထိုင်နေပြီး သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်တွေ ကြောင့် တားဆီးခံရမှုတွေ ရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ အီးမေးလ် ကိစ္စတွေ အတွက် အထူးကျွမး်ကျင်သူဖြစ်ပြီးဘာလင်မှာနေထိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
4. Cody Kretsinger
၂၀၁၁ တုန်းက ဆိုနီ ပလေးစတေရှင်ကို ဟက်ကင်းလုပ်ခဲ့သူ Cody Kretsinger ကတော့ နည်းပညာလောကမှာ လူဦးရေ သန်း ရ၇ သန်းရဲ့အချက်အလက်တွေ ကို ၂၄ ရက် ကြာတဲ့ တိုင်အောင် စီမံခန့် ခွဲ မှု ပြု လုပ်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့် ထောင်ဒဏ် ကျခံခဲ့ ရဖူးပါတယ်။
“Morris Worm” ဗိုင်းရပ်ကို တီထွင်ခဲ့သူ Robert Tappan Morris ကြောင့် ကွန်ပျူတာပေါင်း ၆၀၀၀ ခန့် အခက်အခဲတွေ့စေခဲပါတယ်။သူဟာ တက္ကသိုလ် မှာ စာပေလေ့လာနေစဉ် ၁၉၈၈ ခုနှစ်လောက်တုန်းက ကွန်ပျူတာတွေ ကို ဟက်ကင်းလုပ်မှု ကြောင့် နှစ်ရှည်ထောင်ကျခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
Adrian Lamo ကတော့ အိမ်ခြေမဲ့ တစ်ယောက်အဖြစ် လူသိများပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းက နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကို ဟက်ခဲ့ပြီး ဒေတာဘေ့ တွေ ကို ပြင်ဆင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူ ကို အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောင် ၆ လ ကျခံစေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ စစ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေကို ၀ီကီနဲ့ တွဲ ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုသလို အခြားသော အကြောင်းတွေကြောင့် တကယ့် ကို ပြဿနာကောင်အဖြစ်ကြောက်ရွ ံ့ နေကြရပါတယ်။
၂၀၀၉ တုန်းက ကုမ္ပဏီပေါင်း ၃၀ ကျော ်ဟက်ခံရမှု မှာ ဂူဂဲလ် ရော ၊ရာဟိုးရော ပါ၀င်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းက ဟက်ကာတွေ ဟာ အုပ်စုဖွဲ့ပြု လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘေဂျင်းအခြေစိုက်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး Aurora ကို ဖမ်းလို့ မမိတာကြောင့် ဂူဂဲလ်ဟာ တရုတ်ကနေပြန်လည် ရုတ်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နည်းပညာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ အသက်ငယ်ငယ် ဟက်ကာသမားတွေ အများအပြားရှိနေပါတယ်။Jonathan James ကို ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကပင် ပိုစတာနဲ့ ကြေညာ ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါကလညး် သူ ၁၆ နှစ်သားအရွယ်တုန်းက နာဆာ ရဲ့ဒေါ်လာ သန်း ၁၇၀ ကို ခိုးယူခဲ့ဖူးပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရပြီး ၂၀၀၇ မှာတော့ TJX department ကစတိုးဆိုင်ဆီမှ ငွေတွေ ခိုးယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ ထောင်ဒဏ်တွေ အကျများတာကြောင့် သူ့ ကိုယ် သူသတ်သေခဲ့ပါတယ်။
Kevin Poulsen ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ wired.com အတွက် သတင်းအယ်ဒီတာ ပြု လုပ်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တုန်းက တော့ သူ ဟာ ဖုန်းဘေတွေ ခိုးယူဖုန်းဆက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး FBI ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုဟက်ကင်းပြု လုပ်တာကြောင့် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ထိ ကျခံရဖူးပါတယ်။တစ်ချိန်တုန်းကတော့ သူဟာ black-hat ဟက်ကာတစ်ယောက်ပါပဲ။
10. Jeremy Hammond
Jeremy Hammond ကတော့ လက်ရှိထောင် ၁၀ နှစ်ကျနေသူ နည်းပညာရှင်တစ်ဦးပါ။သူဟာ ခရစ်ဒစ်ကဒ် ခေါ် အကြွေး ၀ယ်ကဒ် 60,000 ကို ခိုးယူခဲ့သူဖြစ်ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး က တုန်လှုပ်ရတဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ၀က်ဆိုဒ််တွေ နဲ့ အချို့သော အကြောင်းအချက်တွေ ကို ဖောက်ထုတ်ကာ ၀ီကီပေါ်ကို တင်နိုင်တဲ့ အထိ နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထောင်ကျခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့ အချို့သော နည်းပညာသမားတွေ က မကျေနပ်ကြပါဘူး။
More in this category: « သင့်ထက်ရော သင့်ချစ်သူထက်ပါ သင့်အကြောင်းကို ပိုသိနေတဲ့ Facebook သမိုင်းဝင် အကြီးကျယ်ဆုံး ဆိုက်ဘာ တိုက်ခိုက်မှု 8 ခု »